Russian Stock Exchange, zvingangoitika kushamisika gore rino | Ehupfumi Zvemari
Russia Stock Exchange, Iri Gore Rinogona Kuitika Kushamisika
Gore rino riri kuomera zvakanyanya kumisika yemari. Asi kana paine nzvimbo yepasi rese inogona kubatsira, ndeyeyeRussia. Hazvishamisi kuti iri kuratidza imwe yeiyo kukwira kwakakwirira mukota yekutanga yegore rino. Mukupesana kune zvakajairika misika yemasheya iri kudzikira munguva ino. Kunyangwe zvakadaro, kubheja pane zveSlavic equities isarudzo inosanganisira njodzi huru nekuda kweakakosha maficha eiyi stock index.
Musika weRussia wemusika wave uri mumwe wemisika irikubuda iyo yakadzikira zvakanyanya kubva 2012 uye chero nguva ivo vanogona kuchinja maitiro aya. Kuverenga pane a upside zvinogona yakakwira kupfuura mamwe masheya indices. Kusvika padanho rekuti ingave iri chaiyo nguva yekutora zvinzvimbo mune ino yemari asset. Kunyangwe yakaderera mari yakawanda isina kunyanyisa simba. Senzira yekuchengetedza kuchengetedza zvido zvako semudyari mudiki nepakati.
Kune rimwe divi, iwe unogona kuisa mari yako mukuchengetedza muRussia stock exchange kuburikidza nenzira dzakasiyana dzekudyara. Kubva kuenda wakananga kumisika yavo yemari kana kuhaya Investment funds izvo zvakavakirwa pane ino yakasarudzika equity index. Chero zvazvingaitika, iwe unenge usina imwe mhinduro kunze kwekunyatsoteerera maitiro avo mumisika yemari. Kuti udzivise imwe isingadiwe mamiriro.
1 Russia: kuwedzera kuri kubuda
2 Kuchena kukwira mumafuta
3 Nemamwe makomisheni akawedzera
4 Kuburikidza nemari yekudyara
5 Imwe yeanonyanya kubatsira ari kubuda
6 Musika wakaomarara kwazvo kuti ushande
Russia: kuwedzera kuri kubuda
Muchikamu chekudyara pane nguva dzose mikana yebhizinesi uye gore rino imwe yacho inogona kunge iri musika wekuenzana. Asi iwe unofanirwa kuziva mashandisiro anoita inoyevedza uye inoyevedza yemari. Zvakanaka, iko iko iko iko iko iko kwakasarudzika hunhu hwesimba remagetsi. Iko makambani emafuta ane chakakosha chakakosha huremu. Zvirokwazvo kupfuura mune kumwe kuchinjana kuri munyika. Iko kune imwe inonyanya kukosha iri Gazprom, uye kuti inogona kuve yechokwadi yekutenga sarudzo kubva ikozvino.
Chero zvazvingaitika, iri chikamu chine chimwe chezvinhu zvine simba kwazvo pasi. Nemhando dzese dzemabhizinesi mitsara kuti iwe ugone kusiyanisa mari dzako kubva zvino zvichienda mberi. Nerubatsiro rwekuti iwe unogona kutora mukana weye rebound rebound, uko yapfuura zvakakosha chipingaidzo chemadhora makumi matanhatu neshanu pagomba mumisika mikuru yemari. Zvakanaka, iwo chaiwo musika weSlavic unogona kunyatso kutora shanduko yeiyi yakakosha yemari pfuma. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuita inobatsira pundutso zvakanyanya zvinobudirira kupfuura pakutanga.
Kuchena kukwira mumafuta
Uku ndiko kukosha kweiyi bhegi pamusika wekutengesa kuti kana iwe uchida kuunganidza zvinowedzera mu mafuta asina kuchena Imwe yesarudzo dzinonakidza dzauinadzo ndeyeye bhegi iri kubva kumabvazuva kwekondinendi yakare. Nekuti pane mari yakawanda iyo iwe yaunogona kuwana kubva ikozvino zvichienda mberi kana ukazvitsanangura iwe neiyi nyowani yekushanda mumisika yemari. Chaizvoizvo nekuda kwekubatana kwayo kwakajeka neiyo oiri chikamu chiri kuvandudza nzombe rally izvo zvichave zvinoshanda kwazvo mukuvhura zvinzvimbo kubva kunzvimbo idzi nyowani kupfuura nakare kose.
Kune rimwe divi, zvakare ine imwe inopfuura inoshamisa yeiyo makambani egasi. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti Russia nderimwe remasimba makuru mune ino simba chikamu. Uye semhedzisiro, inopa ese marudzi emakambani ane hunhu. Iko kwaunogona kutora zvinzvimbo kuti ubatsirwe kubva kune idzi synergies dzemisika yemari. Chero zano rauri kuzoshandisa kubva gore rino razvino. Asi uchiziva nguva dzose njodzi yaunotora mumhando iyi yekushanda pamusika wemasheya.
Nemamwe makomisheni akawedzera
Chero zvazvingaitika, chinokanganisa chikuru chekuenda kuRussia Stock Exchange ndechekuti iwe unenge uine yakakwira mari mukutarisira yekushanda. Zvinenge zvakapetwa zvakapetwa zviviri zvemisika yemari yenyika. Kune rimwe divi, kwete nevapinduri vese vezvemari iwe unogona kushanda neiyi yakakosha shanduko. Iwe hauzove neimwe mhinduro kunze kwekubata bhangi rinoshanda nechikamu ichi cheEuropean geography. Ndokunge, iwe unenge uine mari zhinji kupfuura kana iwe ukashanda nechisarudzo indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Icho chinhu chaunofanirwa kuve nacho kubva pakutanga.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora ndechekuti kuongororwa kwemaitiro kuchanyanya kuomarara kupfuura kusvika zvino. Hazvishamisi kuti hazvishamise kuti mazhinji emakambani ari mune ino stock index haazivikanwe kune vakawanda vashoma nevepakati varimi. Ndiyo imwe yenjodzi dzakawedzerwa dzaunofanira kutarisana nadzo kana iwe uchida kuisa mari mune imwe yemisika yekutanga yemisika kunze uko panguva ino. Uye zvakare, inozivikanwa ne iva akanyanya kugadzikana uye izvi ndizvo zvinoita kuti zvinyanye kunakidza kune vanonyanya kufungidzira vanoita mari muchikamu ichi.
Kuburikidza nemari yekudyara
Rimwe zano rauinaro usati waisa mari mumusika weRussia wemusika uri kuburikidza nechinhu ichi chemari. Izvo zvinobatsira iwe kusiyanisa mari yako, asi iine njodzi shoma pane kutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Pamwe nekuti mari idzi inosanganiswa nemari yemari kubva pamari yakatarwa. Saka kuti nenzira iyi, unodzivirirwa kubva pazviitiko zvisingafadzi zvemisika yemari. Iine huwandu hwakawanda hwekudyara mari iyo inogona kukubatsira iwe mukuita sarudzo.
Ehezve, kuburikidza nechigadzirwa ichi chemari uchave nemikana yakawanda yakawanda yekudyara mumisika yemari iyi. Kubva pane zvakasiyana maneja ndiani afunga kushambadzira uyu wakasarudzika muenzaniso wekudyara. Mupfungwa iyi, mari idzi dzinogona kusanganiswa nezvimwe zvakajairika masheya indekisi. Sechirongwa chekudzora chero mhando yenjodzi mukushanda. Uye nemakomisheni ayo ari kukwikwidza zvakanyanya zvine chekuita nekuvhura zvinzvimbo kubva kumusika weRussia equity. Mune izvo zvakafananidzwa seimwe yedzakanakisa dzimwe nzira dzauinadzo parizvino kugutsa ichi chinodiwa.
Imwe yeanonyanya kubatsira ari kubuda
Equities muRussia ndeimwe yeakanakisa kuita equities gore rino. Kusvika padanho rekuve imwe yeinobatsira kwazvo, zvirinani kusvikira zvino zvegore, ndiko kuti, mukati mekota yekutanga. Nenzira iyi, inoumbwa seimwe yesarudzo dzinogona kubatsira kuwana mari hombe inowanikwa pamusoro pemwedzi mishoma inotevera mukati meinonzi misika iri kubuda. Iko imwe yenzvimbo dzakakodzera zvikuru pasina mubvunzo kuti yeiyi nyika huru yeSlavic.
Panyaya iyi, misika yemari iri kubuda yaive sarudzo yakanaka muna 2017. Hazvishamise kuti indekisi MSCI Inotangisa Musika yaive imwe yeanonyanya kubatsira apo revalue ingangoita 20%. Pamusoro pemhedzisiro inogadzirwa neiyo huru indices indices yenyika dzekuMadokero. Kunyangwe mune ino nguva, hazvigone kukanganwika kuti maRussia equities haana kuita zvakanaka kwazvo zvine chekuita nekuita kwavo. Nekuti zvirokwazvo, MSCI Russia yakadonhedza donhwe rakatenderedza 8%. Kunyangwe dhinomineta yayo huru iri mumwedzi iyi, kwave kusagadzikana kwayo kwakasimba uye izvo zvakatungamira tsika dzayo kutora kosi yakanyanyisa.
Musika wakaomarara kwazvo kuti ushande
Hazvishamisi kuti tiri kutaura nezve musika wakaomesesa kushanda, uko chokwadi chekuti iwe unogona kugadzira purofiti yepamusoro kana iwe ukapinda panguva yakakodzera inomira. Nekuti kana zvisiri, unogona kuzviwana uine zvinopfuura kamwechete kushamisika kwakashata kunogona kukuvadza zvakanyanya yako account yekuchengetedza account. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei kuchenjerera Iyo inofanirwa kuve chiteshi mune ako ekudyara anovandudzwa kubva ikozvino zvichienda mberi. Hazvishamisi kuti iri chokwadi rakaomarara musika wemasheya waunofanirwa kuziva nehumwe kusimba. Zvirinani kana iwe uchida kuchengetedza nzvimbo dzako pamusika wemasheya.
Kune rimwe divi, haufanire kuregeredza rakanyanya kukosha dhata rehupfumi hwayo. Nekuti ivo vanokwanisa kukupa iwe isinga nzwisisike nezve uko kwavo misika yemari inogona kuenda. Zvakanaka, yambiro inogona kupihwa nenyaya yekuti hupfumi hweRussia hwakabuda kubva mukudzikira kwakakomba uye kwakakomba, kusvika panotarisirwa kuve ne kukura kwakanaka kwe1,9%, zvinoenderana nedhata rakapihwa neOECD. Kunyangwe, zvakadaro, pazasi peavo vanoonekwa nenyika dzichiri kusimukira, dzinove dziri pamusoro pe4% mazinga.
Kuti utore mukana wechiitiko ichi chakanaka muchikamu chino chekondinendi yakare, mari yekudyara uye maEFs anotarisana nemusika uyu ndiyo zviridzwa zvakanakisa zvekudaro. Vatengesi vanopinda izvozvi vanogona kubatsirwa nekukurumidza mukukura kuri kuitika muhupfumi hweRussia. Nepo kune rimwe divi, iko kubatsirwa kweruble zvakare chinhu chinotamba mukutsigira pundutso rwemari. Mumusika une ramangwana rakakura renguva ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Russia Stock Exchange, Iri Gore Rinogona Kuitika Kushamisika
Iwo akanakisa emuviri zvikwama zvemari yemadhora
Nzira yekuvhara sei stirki?